सफ्टवेयर र उपकरणहरू म बिना बाँच्न सक्दिन Martech Zone
सफ्टवेयर र उपकरणहरू म बिना बाँच्न सक्दिन
शुक्रबार, डिसेम्बर 25, 2009 सोमबार, जनवरी 1, 2018 लोरेन बल
पढाइ डगको पोष्ट मलाई मलाई ती सबै अनुप्रयोगहरूको बारेमा सोच्न लगाउँथें जुनमा म आउँदछु म कसरी मेरो व्यवसाय र मेरो जीवन चलाउँछु। धेरै, टgleगल र ड्रपबक्स, डग पहिले नै उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ केहि अरू व्यक्तिको सूची छ जुन मैले बिना जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिन:
वेब नोट्स - यो मेरो वेब अनुसन्धानको अमूल्य अंश हो। चाहे म ग्राहकको परियोजनाको लागि जानकारी खोजीरहेछु, ब्लग पोष्टको लागि प्रेरणा, वा पीआर अभियानको नतिजा ट्र्याक गर्नुहोस्, वेबनोटेसले मलाई सूचना पोष्ट गर्न र पोस्ट-नोट्स र हाइलाइटर्सको साथ संगठित गर्न अनुमति दिन्छ। र सबै भन्दा राम्रो पक्ष रिपोर्ट उत्पादन उपकरण हो। जब एक स्वचालित गुगल सचेतको साथ मिलेर हामी वेबलाई खोज्न र सारांश रिपोर्ट तयार पार्न घण्टा बिताएको जस्तो लाग्छौं!
ठेगाना दुई - ठेगाना पुस्तिका भन्दा बढि, यो एक सही CRM उपकरण हो। मैले मेरो सम्पर्कहरू, पहुँच (मैले आफ्नै बनाएको, केटो त्यो गीकी थियो), एक्ट र आउटलुक व्यवस्थापन गर्न धेरै बर्ष डाटा बेसहरू प्रयोग गरेको छु र मैले यो पूर्णतया फिट पाएको छु। वेब आधारित, म मेरो सम्पूर्ण टीमको साथ मेरो सम्पर्कहरू साझेदारी गर्न सक्दछु। हामी सम्पर्कहरू र प्रोजेक्टहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछौं निर्मित कार्य सूचीको साथ। साथै, म बिस्तारै कन्स्ट्यान्ट कन्ट्याक्टबाट ठेगाना दुई ईमेल उपकरणमा सर्दैछु। यद्यपि यो डिजाइन र रिपोर्टि structure संरचनाबाट अलि सीमित छ, म डाटा बेस क्वेरी गर्न को लागी, सही समूह चिन्न, र उपयुक्त सन्देश डेलिभर गर्न मन पराउँछु।
मलाई एडीलाई ईमेल गर्ने क्षमता पनि मन पर्छ जुन म मेरो डाटा बेसमा समावेश गर्न चाहान्छु वा एक अर्कासँग परिचय गर्न चाहन्छु र उसले यसको ख्याल राख्छ। (हो मलाई थाहा छ उनी वास्तवमा एक व्यक्ति होइन, तर कहिलेकाँही उनी मेरो लागि वास्तविक कर्मचारी भन्दा धेरै सहयोगी गर्दछिन्, त्यसैले उनलाई एक व्यक्तिको रूपमा सोच्न गाह्रो हुन्छ))
धृष्टता GenericName - व्यक्ति जो मलाई राम्ररी चिन्दछन् उनीहरूलाई यो असाध्यै हास्यास्पद लाग्छ कि म एक लेखकको रूपमा आफ्नो जीवन कमाउँछु, किनकि म लेखक होइन। म एक वक्ता हुँ! एक वक्ताको रूपमा, म पोडकास्टहरू जोड्ने विचारबाट उत्सुक थिए मेरो ब्लग र ओडेसिटीले यसलाई सम्भव बनायो। धेरै थोरै समय लगानी भएपछि, म भर्खरैबाट संपादन प्रोमा सर्दै छु। म अलिकता पनि उम, ईर वा फोन कल अवरोधलाई सम्पादन गर्न सक्दिन। (यद्यपि कहिलेकाहिँ म तीनिहरु लाई छोडिदिन्छु, किनकि उनीहरुले चरित्र थप्छन्)
मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि साप्ताहिक पोडकास्टहरूले मैले गर्नुपर्ने लेखको मात्रा कम गर्दछ, तर त्यहाँ अरू फाइदाहरू पनि छन्। कार्यक्रमहरू मलाई आमन्त्रित गर्न एक बहाना दिन्छ एउटा साथी रेकर्डि session सत्र र भ्रमणको लागि। अब जब म टेक्नोलोजीमा व्यवस्थापन गर्न सिकेको छु, रेकर्डिले केहि मिनेट लिन सक्दछ, त्यसपछि हामीसँग अन्य सामग्रीहरू समेट्ने र कुरा गर्ने समय हुन्छ!
यी तीन अनुप्रयोगहरू २०० in मा मेरो लागि नयाँ थिए। यो आश्चर्यजनक छ कि कसरी नयाँ प्रविधि तपाईंको जीवनको एक हिस्सा हुन्छ। म अर्को वर्ष के खोज्छु भनेर म पर्ख्न सक्दिन!
टैग: दुई ठेगानाधृष्टता GenericNameराउन्डपेगउपकरणवेब नोटहरू
उपकरण र अनुप्रयोगहरू जुन मलाई व्यवसायमा राख्छ
डिजिटल मिडियाको लागि सुपर बाउल छोड्दै
डिसे 25, 2009 मा 11: 44 AM
हामी बीचको समानताहरू देख्न रोचक छ, लोरेन! मैले ठेगाना दुई पटक प्रयास गरेको छैन - तर मेरो सीआरएम मेरो निकट भविष्यमा हुन सक्छ।
डिसेम्बर १, २०१ 25 2009:२:12 अपराह्न
तिनीहरू महान दिमागको बारेमा के भन्छन्?